narathein - ရသစာပေ
ဘမောင်ရေးတဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်
ဣဿာမစ္ဆရိယဆိုတာဟာ မနာလိုဝန်တိုခြင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိမယ်လို့ ကျုပ်ယူ
ဆမိတယ်ဗျာ့မေတ္တာရှေ့ထားပြီးမုဒိတာပွားဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အခြေခံအုတ်မြစ်ချထားပေးခဲ့
ပါတယ် ။ အပြည့်အစုံသို့
ခြေတလုံးအိမ်တိုင်ဘ၀နှင့် ကမ္ဘာအရှေ့မှအနောက် တောင်မှမြောက်သို့ကျွန်တော်လေလွင့်နေ
ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါ။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အသက်ကြီးလာသလို အကြား
အမြင် ဗဟုသုတလည်း တိုးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ရွာတစ်ဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းလာသည်။မွေးရပ်မြေက
. .. . . . . . . . . .. ဆက်ဖတ်ပါ
ရန်ကုန်ရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့တဓူဝ ဒုက္ခတွေကို သတင်းပို့ရတာ၊သတင်း
ရေးရတာကိုငြီးငွေ့လှပြီလို့ သတင်းသမားတယောက်က ပြောပါတယ်။ ပြည်သူတွေပျော်တာ
ကိုကလေးသူငယ်တွေပြုံးပျော်တာသတင်းရေးချင်လှပြီလို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါ
တဂျိမ်းဂျိမ်းဆိုတဲ့ တခါးသံကြောင့် ထောင်ကိုရောက်ပီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ထောင်ရဲ့အနံ့အ
သက် က အပြင်လောကနဲ့မတူဘူး နားထဲမှာလည်း သံသံချင်းထိရိုက်တဲ့အသံတွေဟာထောင်ရဲ့
သံစဉ်တခုပဲ။မျက်လုံးကိုစည်းထားတဲ့အ၀တ်ဖွင့်မပေးပေမဲ့ အကြားအာရုံတွေကိုတော့အသံတွေ လာရာကိုစွန့်ထားရတယ်။ ဘေးနားက စကားသံတွေ " ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ" " အားလုံး၉
ယောက်ပါဆရာကြီး" အဲဒီတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ အမှုတွဲ ၉ယောက်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးကိုခဏ
ရပ်ပြီး ဘာတွေလုပ်ဦးမလဲဆိုတာကို နားထောင်နေမိတယ်။"မင်းတို့အားလုံးခေါင်းတွေငုံ့တာကြ"
ဆိုတဲ့အသံဟာ ငရဲပြည်ကငရဲမင်းလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကတော့ ထောင်မကလို့
ငရဲပြည်ပဲရောက်ရောက် ထောက်လှမ်းရေးထက်စာရင် နည်းနည်းတော့ သက်သာမှာပဲ။ (၁၀)
ကျော်ကျော်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခကိုယ္ခုမှပဲ ကျွတ်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သိပ်မစဉ်းစားရဲဘူး။
အဖမ်းမခံရခင်တုန်းက စနေနေ့တိုင်းလုပ်အားပေးလုပ်ရ၊ တစ်ပတ်တခါမီးကင်းစောင့်ရနဲ့ ကိုယ့်
စားဖို့လုပ်ရတယ်မရှိဘူး။ ဒီကြားထဲဘယ်လမ်းအတွက်အလှုငွေထည့်ပါဦး။ ဘယ်စာသင်ကျောင်
အတွက် ဘယ်ဘုရာဲးပြုပြင်ရန်အတွက် တစ်လနဲ့တစ်လထည့်လိုက်ရတဲ့အလှုငွေလက်ကိုမလည်
ဘူး။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလှုအတန်းကိုမနှမြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကုန်ဈေးနှုန်း
"အားလုံးမျက်လုံးစည်းထား အ၀တ်တွေချွတ်လိုက်" ဆိုတဲ့အသံကြောင့်
အတွေးကိုရပ်လိုက်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး မျက်လုံးစည်းထားတဲ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်လိုက်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားရပါးရကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အသိက နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်း
ပေါ်ကို စောင်တစ်စောင် အုပ်ချလိုက်တာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ စောင့်
ကြောင့်ထိုင်နေနေတဲ့လူရဲ့ကြောကိုတော့သေသေချာချာမြင်ရတယ်။ " ဒါဘယ်သူပါလိမ့်လို့"
သိချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကြောကိုလှမ်းတို့လိုက်တယ်။ လှည့်မကြည့်ပဲ သူ့ရဲ့လက်က အသာနေ
ဆိုတဲ့အနေနဲ့ လက်ကာပြတယ်။ " ကဲအားလုံထ စောင်ကိုလှန်မကြည့်ကြနဲ့ ရှေ့ကိုတည့်တည့်
လျှောက်" ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထောင်ဝါဒါ တစ်ဦးရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာဆီ
လိုက်သွားကြရပါတယ်။ ခြံစည်းရိုးထဲကိုရောက်ရင်ပဲ " ပုံစံ" ဆိုတဲ့အသံဟာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်
ခုလုံးကို တိတ်ဆိတ်သွား စေခဲ့တယ်။ တိုက်ဘေးကနေ အနောက်ကိုလျှောက်ရင်း တနေရာ
အရောက်မှာ" ရပ်တော့" ဆိုတဲ့ ငှက်စိုးထိုးသံကြီးကို ကြားလိုက်ရပြီး တခါးဖွင့်သံကိုပါကြား
လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူအားလုံးလေးယောက် အခန်းထဲကိုဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲ တစ်
ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ' မင်းတို့အားလုံးနားထောင် ဘေးခန်းတွေနဲ့
စကားမပြောရဘူး ဘယ်သူမေးမေး မပြောရဘူး စကားတိုးတိုးပြောရမယ် " ကျွန်တော်တို့
လေးယောက် စလုံး ထောင်ဝါဒါကိုသေသေချာချာကြည့်လိုက်မိတယ်။ မျက်နှာကခွေးဘီလူး
မျက်နှာနဲ့ တကယ့်အာဏာပါးကွက်သားပဲ။ ပြောပြီးသူထွက်သွားတယ်။
အခန်းထဲသေချာကြည့်တော့မှ အခန်းထောင့်မျာ ဂန်ဖလား(၂)လုံး၊ ဖျာ(၂)ချပ်
အခန်းရဲ့အပြင်မှာတော့ သောက်ရေအိုးတစ်လုံး။ ဒါပေမယ့် ရေခွက်မရှိဘူး၊ ရေသောက်ချင်နေ
တယ်။ဘယ်လိုရေသောက်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေတုန်း ၀န်ထမ်းတစ်ဦးနဲ့ အကျဉ်းသားနှစ်ဦး
ထမင်းလာပို့တယ်။ ခပ်ဝါ၀ါထမင်းနဲ့ ညစ်နက်နက်ဟင်းရည်ထဲမှာတော့ ကန်စွန်းရွက်အရင့်တွေ
ချဉ်ပေါင်ရွက်ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ နောက် လက်သည်းခွံလောက်ရှိတဲ့ ငပိ၊ ထောင်ကကျွေးတဲ့ထမင်း
ဟင်းကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်သွားတယ်။ မသေအောင်စားရမှာပဲဆိုပြီး ကြိတ်မှိတ်ပြီးစားပစ်လိုက်
တယ်။ အိမ်မှာဆိုရင် ဟင်းမကောင်းလို့ အမြဲတမ်းညီးညူနေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ခွေးတောင်မစား
တဲ့ ထမင်းဟင်းကို ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ်စားခဲ့ရတယ်။
တဖက်ခန်းကစကားသံသဲ့သဲ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး နားစွင့်လိုက်ကြ
တယ်။" ဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲ၊ ဘာအမှုလဲ" "တရားမ၀င် စာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေမှု" " ဒါဆိ
ု ကျောင်းသားတွေပေါ့" "ဒါနဲ့ အကိုကရော" " န၀တ ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စကားပြောမိလို့ အချုပ်ပဲ
ရှိသေးတယ်။ဒါပေမယ့် ထောင်ဝင်စာတော့တွေ့ရတယ်။ ထန်ူလျက်ပြစ်ပေးလိုက်မယ်။" တဖက်
ခန်းမှ ဘ၀တူအကိုက ထန်းလျက်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး အပြုံးကိုယ်စီ
နဲ့ပေါ့။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ 'ဒေါက်' ကနဲဆို တဲ့အသံကြောင့် လှမ်းပြီးယူကြည့်လိုက်တော့ ပလတ်
စတိတ်အိပ်ထဲမှာ ထန်းလျက်နဲ့ဆေးလိပ်။ "ကြိုးပြန်ပေးလိုက် အကုန်စားပြစ် ချန်မထားနဲ့" ထန်း
လျက်က(၆)ခဲ၊ ဆေးလိပ်(၂)လိပ် " မီးခြစ်ပြစ်လိုက်မယ် ၀န်ထမ်းလည်းသတိထားဦး" ဆေးလိပ်
မီးရပြီဆိုတာနဲ့ အငမ်းမရဆေးလိပ်ကို တယောက်တလှည့်သောက်ရင်း တန်းလျက် တစ်ယောက်
အိမ်မဟုတ်ဘူး"ကျွန်တော်တို့စကားသံတွေ၇ပ် ပြစ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် တိတ်ဆိတ်
နေလိုက်တယ်။ လက်ထဲမှာရှိတဲ့ထန်းလျက်ကိုလျှာနဲ့၇က်လိုက်၊ နဲနဲကိုက်လိုက်နဲ့ တော်တော်
လေးကိုအရသာရှိလိုက်တာ၊ ဘာနဲ့မှမတူဘူး။ စိတ်ထဲမှာပြုံးမိတယ်။ ထန်ူလျက်မကြိုက်တဲ့ကျွန်
တော် ယခုတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး လက်ထဲမှာကျန်
နေတဲ့ထန်းလျက်ခဲကို ဖျာထောင့်စွန်းမှာချကာ ပလက်လှန်လှဲချလိုက်မိတော့တယ်။
" သားဘာတွေလုပ်နေလဲ အိမ်ပြန်မအိပ်တာဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲ၊ ဒီနေ့ရောဘယ်
သွားအိပ်သီးမလဲ" စကားတွေဖောင်ဖွဲ့အောင်ပြောနေတဲ့အမေဟာ ကျွန်တော်စားနေတဲ့ပန်ကန်ထဲ
ကို ဘဲဥကြော်ထည့်ပေးပြီး " မင်းဒီည ဘယ်မှလျှောက်မအိပ်နဲ့ ၊ သားအမိနှစ်ယောက်ထဲရှိတာ
အမေ တစ်ခုခု ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အခုတလော သွေးကလည်းတိုးနေတယ်။ အိမ်မက်တွေ
လည်းမကောင်းဘူး " လို့ပြောပြီး အိမ်ရှေ့ဘက်ထွက်သွားတဲ့ အမေ့ရဲ့ကျောကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်
ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ ဟင်းခွက်တွေ၊ ကန်စွန်းရွက်ချည်ရည်ဟင်း၊ငါပိထောင်း၊ဘဲဥကြော်။ တကယ်တမ်းကြ
တော့ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ငါးပိထောင်း မကြိုက်ဘူး။ ဒီနေ့အဖို့ ကျွန်တော်ကြိုက်သွားမိတယ်။ အမေ့ရဲ့စကား
အမေ့ရဲ့ဟင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်နောက်ဆုံးများဖြစ်နေမလား၊ စိတ်ထဲမှာထင်နေမိတယ်။
ညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ခြောက်လှန့်နေသလိုပါပဲ မိမိရဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်
ဘက်တွေမိသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ " အိမ်ရှင်တို့" ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ
အမေက " ဘယ်သူတွေလဲဟေ့ သား ထ စမ်း ဘယ်သူတွေလည်းမသိဘူး" အမေ့ကိကြည့်လိုက်
မိတယ်။ အမေမသိပေမယ့် သားသိတယ်အမေ။ လို့ စိတ်ထဲက ပြောလိုက်မိတယ်။ တံခါးကိုဖွင့်လိုက်
တယ်ဆိုရင်ပဲ၊ ရ ၀ တ နဲ့အရပ်ဝတ်လူစိမ်း (၃)ယောက်၊ နောက်ပြီးရဲတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်။ " အဒေါ့်
သားကို ဒီကဆရာကြီးတို့က ခဏခေါ်သွားပြီးမေးချင်လို့တဲ့" အမေ့မျက်နှာလေးဟာ ချက်ခြင်းဆိုသ
လို အိုရော်သွပြီး မျက်ရည်တွေဟာပါးပြင်ပေါ်ကို စီးကျလာတယ်။ " အဒေါ်သားကိုဘာလုပ်ကြမလို့လဲ
ဟင် အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်၊ အဒေါ့်သားမှားတာရှိရင် အဒေါ်တောင်းပန်ပါတယ်..ဆရာကြီးတို့ရယ်"
အမေရဲ့စကားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်မှာဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး " အမေ သားဘာမှမဖြစ်
ဘူး" ဆိုတဲ့ စကားဟာအမေ့ကိုအားပေးလိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့သိနေတယ်။ "ဘာမှမဖြစ်ပါ
ဘူး တညလေးပါ မေးစရာလေးရှိတာမေးပြီးပြန်လွှတ်မှာပါ။ စိတ်ချပါအဒါ့်သားဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး"
ခဏလေးပါ " ဘာလိုလိုနဲ့ခဏလေးဆိုတာအခု (၃) လတောင်ပြည့်သွားပြီ။ ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့
စကားဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မသေရုံခံစားခဲ့ရတယ်။
" ဟေ့ကောင်ဘာတွေတွေးနေတာလဲ တော်ကြာဂေါက်သွားဦးမယ်၊ ကျားထိုးရအောင်"
အခန်းဖေါ်တွေရဲ့စကားကြောင့် တွေးစတွေကို ဖျောက်ပြစ်ပြီး ကျားကစားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့
အင်းစိန် သီးသန့်ထောင်(၂) ဆောင်တိုက်ခန်းတွေမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘယ်ဆုကို
ထောက်ခံခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုရှိကြတယ်။ သူတို့ကတော့ ထောင်ဒဏ်အသီးသီး
ကျသွားကြပြီ။ အသက်နဲ့မညီမျှတဲ့ကြီးမားတဲ့ နှစ်တွေ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ မျက်နှာတွေပေါ်မှာ
ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းတွေမရှိပဲ အရာရာကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ထောင်ထဲမှာဖြတ်
သန်းကြတယ်။ တယောက်ကိုတယောက်ညီအကို မက ချစ်ကြတယ်။ တယောက်နေမကောင်းရင်
၀ိုင်ဝန်းပြီး လိုအပ်တယ ဆေးဝါးကအစကူညီကြတယ်။ တချို့လည်းထောင်ကျပြီး အိမ်တွေကအဆင်
မပြေလို့ နှစ်လတစ်ခါထောင်ဝင်စာလာတဲ့သူတွေကို အမြဲလာတဲ့သူတွေက မုန့်တွေ၊ ဟင်းတွေ၊
ဆေးလိပ် တွေကို ဝေမျှစားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို အချုပ်တွေကို လည်း စိတ်ဓါတ်မကျအောင်
အမြဲတမ်း ကူညီအားပေးကြတယ်။ ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ နောင်တော်များရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကိုတွေးတော
နေတုန်း " ရုံးထွက်" ဆိုတဲ့အသံကြောင့် ရင်ခုန်သွားမိတယ်။ ရုံးထွက်ဖို့အဆောင်ထဲက ဖြတ်လျှောက်
တယ်ဆိုရင်ပဲ ' ရဲဘော်တို့ကံကောင်းပါစေ" ဆိုတဲ့စကားသံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကံကောင်း
ပါတယ်။ မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိတဲ့ န၀တရဲ့ တရားစီရင်ရေးစစ်ခုံရုံးက ကြီးမားတဲံထောင်ဒဏ်တွေ
" ( - - )ထောင်ဝင်စာ" ဆိုတဲ့အသံကြောင့် ကျွန်တော်ပျော်သွားမိတယ်။ ရက်ပေါင်းများစွား
မတွေ့ရတဲ့ အမေ့ရဲ့မျက်နှာကို ကျွန်တော်တွေ့ချင်နေမိတယ်။ အပေါင်းအဖေါ်တွေပေးထားတဲ့ ရှပ်အ
ကျီင်္လက်ရှည်ဖြူ ၊ ပုဆိုးအဖြူ ကိုသေချာဝတ်ပြီး ထောင်ဝင်စာအခန်းကို ၀န်ထမ်းနဲ့အတူရောက်ရှိခဲ့
တယ်။ အရွယ်ကျနေတဲ့ အမေ့ရဲ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော့်အတွက်အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ " သားနေ.
ကောင်းတယ်နော်၊ သားထောင်ဘယ်လောက်ကျလဲ " စိုးရိမ်မှုများစွာနဲ့ ၊ မျက်လုံးအိမ်ကစီးကျလာတဲ့
မျက်ရည်တွေနဲ့ တုန်တုန်ရင်ရင်မေးလိုက်တဲ့ အမေ့စကားသံဟာ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲမှာ နာကျင်
သွားခဲ့ရတယ်။ စိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီး အမေအားမငယ်အောင် တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ " သိပ်မကျ
ပါဘူးအမေ ခဏလေးပါ" " သားကခဏလေးဆိုပေမယ့် သားကိုခေါ်တုန်းကလည်း ခဏလေး
(၄) လတောင်ရှိသွားပြီ။ အခုလည်း ဘယ်လောက်ကြာဦးမှာလဲ သားရယ်။"
" အားလုံးထွက်တယ်" ၀န်ထမ်းရဲ့အသံကြောင့် အမေမှာစရာရှိတာမှာ နေကောင်းအောင်
နေဖို့ ၊ မလာနိုင်ရင်မလာဖို့၊ အဆင်ပြေကြောင်းပြောခဲံတာတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် (၇) နှစ်ကျော်
ခဲ့ပြီ။ မနက်ဖြန်ထောင်ဝင်စာတွေ့မယ့်ရက်၊ တညလုံးအိပ်မရဘူး။ အခုလောက်ဆိုရင် အမေတစ်
ယောက်သားအတွက် ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရင်း (ခဏလေးပါ) ဆိုတဲ့စကားကို မျှော်ရင်း သား
ပြန်လာမဲ့ရက်ကိုစောင့်မျှော်ရင်း. . . . . . . . . . . ... . . . ။
(နိုင်ငံရေးမိသားစုဝင်များဟာ "ခဏလေးပါ" ဆိုတဲ့ စကားလေးကို မျှော်ရင်း သူတို့ရဲ့ ခင်ပွန်း၊ သာ။သမီး
များကို မျှော်ရင်း၊ ထောင်ဝင်စာတစ်လ တစ်ခါတွေ့နေကြတုန်းပါပဲ)
မျိုးချစ်စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် (၁၉၁၅-၁၉၉၉) အကြောင်း
ဓါတ်ပုံ - ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် မိသားစု
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နဲ့ စာပေလောကမှာ လူသိထင်ရှားတဲ့
ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်၊ မျိုးချစ်
စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရဲ့  ဇာတီသွေး၊ ဇာတီ
မာန် တက်ကြွမှု၊ စံနမှုနာယူထိုက်သော အကျင့်သီလ၊
သိက္ခာသမာဓိ၊ စာရေးအတက်ပညာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ၊
ချစ်မြတ်နိုးစရာ၊ မှတ်သားဖွယ်ရာများကိုိ သတင်း
ဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်း (၁၉၂၆-၂၀၀၈)၊ သတင်းစာ
စာရေးဆရာမ ဒေါ်ခင်ဆွေလှ နဲ့ မြန်မာ့သုတေသီ
ဦးအောင်စောဦး တို့၏ ပြောဆိုချက်များကို
ဒေါ်လှလှသန်း (ဗွီအိုအေ) က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
"ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် က ၁၃၀၀ အရေးတော်ပုံတုန်းက စတင်ပြီး ဗမာစာပေလောက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကကို ၀င်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၀၀
အရေးတော်ပုံမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ တက်တက်ကြွကြွ
ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ရွှေတိဂုံဘုရား ကုန်တော်ပေါ်
မှာ အမျိုးသမီးထု အစည်းအဝေးတခု ကျင်းပပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ အခမ်းအနားမှုးလုပ်သူကတော့ မခင်မြ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး
အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှာ မခင်မြ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အသင်းစထောင်ချိန်ကစပြီး ခင်မျိုး
ချစ် ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ ဆောင်းပါးများ စတင်ရေးပြီး မြန်မာစာပေ လောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်" သတင်းစာဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်း မကွယ်လွန်ခင်က ပြောဆိုကောက်နုတ်ချက်။
ကိုAMT ရဲ့ ရသစာ တမ်းလေးဖြစ်တဲ့ ည၏အာခေါင်လေး ကို မီးစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျလို့ တင်ထားပါတယ်။ ည၏အာခေါင်
ရေလယ်ကောင်သောင်ထွန်း နတ်သမီးနေတဲ့ကျွန်း ဆိုတဲ့ ၀ထ္တု ကို ရေးသားပေးပို့လာသူ က တော့
ကိုညိုထက်ညိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ`၏ ရသစာ ပေ ကို ခံစားဖတ်ရှုကြပါ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်၍